Murume ari muhero | Apg29
Verenga ichi uye kuona zvakanaka akaita firimu nezvaJesu 'nyaya mupfumi naRazaro. Nyaya haisi kuenzanisa. Zvakanyatsoitika.
Saizvozvo zvakaitika kuti mupemhi wakafa, akatakurirwa nevatumwa kuchifuva chaAbhurahamu. Mufumi akafawo, akavigwa. Uye kugehena, apo akanga ari kurwadziwa, ndokusimudza meso ake akaona Abhurahama ari kure, naRazaro ari pachipfuva chake.
Kwakanga kuno mumwe murume mupfumi aipfeka nguo dzepepuru nomucheka wakaisvonaka uye aigara ose zuva mafaro uye muumbozha. Uye kwakanga kune murume murombo ainzi Razaro, akanga azere maronda akarara pasuo rake, uye aida kuti kugutsa nzara yake mafufu dzakawira patafura yomupfumi. Uyezve imbwa dzaiuya dzichinanzwa maronda ake.
Iye ndokudanidzira akati: Baba Abhurahamu, ndinzwirei tsitsi, mutume Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura atonhodze rurimi rwangu, nokuti ndiri kurwadziwa kwazvo mumoto muno.